Halkan waxaa ku yaal sida ilkaha cad ee leh bakeylka dubista - SAN PLUS MAG - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO »Sidee baa ilkaha cad u leh baking soda - SANTE PLUS MAG
Halkan waxaa ah sida loo helo ilko cad oo leh baking soda - SANTE PLUS MAG
Welcome / Medecine / Caafimaadka afka iyo ilkaha / Si aad u cadaydo ilkaha /
Waa kuwan sida loo helo ilko cad oo leh bakeyle
Gacalisasho dhalaalaya waa muuqaal ah nadaafadda ilkaha wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, dad badani waxay u jihaystaan ​​ugu dambeyn taariikhda, illaa, nasiib daro, waxay noqotaa goor dambe si loo saxo. Runtii, arrimo badan ayaa wax ka qabta ilkahaaga adoo garaacaya midabkooda ama sababo muuqaal ah oo ah hawlaha kugu dhaleeceynaya si aad u qarisid dhoola cad, hal mar. Ha argagaxin, ogow in weli jiro wakhti ay ku xalinayaan dhibaatadan adigoo isticmaalaya talooyinkan 7 ee ah in ilkahaagu cad yihiin!
Nadaafadda afka ee liita waxay saameyn kartaa dhoola-cadaynta siyaabo badan. qaar ka mid ah cuntooyinka ama dareeraha mugdiga ah sida kafee ama shaaha waxay keenaan laydh yar oo ilkahaaga ah si isku mid ah oo ay u soo saari lahaayeen dharkaaga. Run ahaantii, kuwani waxay keenayaan si tartiib tartiib ah markii ay maalin kasta wada cunayaan. Ku dar dhaqamada aan caafimaad lahayn sida khamriga ama tubaakada oo aad kujirto ilkaha yellowed in aad leedahay aad iyo aad u adag tahay inaad muujiso.
Ujeedadaas, talooyinka qaarkood ee guriga lagu sameeyo waxay noqon karaan kuwo waxtarka leh. Dabiiciga ah oo aad u fudud, waxay noqon doonaan isbaheysi aad ka soo horjeedo hawlaha ilkaha iyo xajmiga dhalada. Fiiro gaar ah, kuwani ma badalaan kiis kasta oo si joogta ah u caday ilkaha oo isticmaalkooda looguma talin beddelka booqashada dhakhtarka ilkaha!
Dhaqtarka ilkaha iyo qoraaga kuwa ugu fiican Cuntada Ilkaha, ka Dr. Steven Lin wuxuu xiiseynayaa wax ku oolnimada kaarboonka firfircoon, taas oo aad uga badan isaga. Marka lagu daro faa'iidooyinka badan ee qaybtan ka mid ah caafimaadka, waxay muujin lahayd waxtarka aadka u xiisaha badan ee ilkaha. Sida laga soo xigtay Dr. Lin, waxa uu noqon lahaa niyadjab kaas oo yareeyn doona huurada iyo qaybaha kale ee mas'uul ka ah muuqaalka hawlaha.
Maaddooyinka caanka ah ee nadaafadda afka, baking soda wuxuu ahaan lahaa, sida uu qabo mid waxbarasho waxaa daabacay Joornaalka Daaweynta Daaweynta Daawada, oo ah unug muhiim ah oo lagu gaari karo ilkaha caddaanka ah muddo gaaban. uu saameynta abrasive isagoo ka sii daciifsan qaybaha cadayga, isticmaalka wuxuu noqonayaa mid la doorbidi karo in laga saaro dharka ilkaha. Isticmaal toddobaadkii hal usbuuc toddobaadkii ugu badnaan si looga fogaado waxyeelaynta ilkaha.
Sida laga soo xigtay Dr. Oz, casiirka liin wuxuu wax ku ool karaa daaweynta dabiiciga ah ee ilkaha cad, haddii loo isticmaalo qadar yar. Tani waxay faa'iido u leedahay, laakiin si kastaba ha ahaatee, miro aad u dhaadheer u ah dhalada iliga waa in lagu qasi karaa biyo ka hor inta aan la isticmaalin. Ha ka tegin wax ka badan hal daqiiqo halista ah inuu ficilkiisa u celiyo dhibaatada ilkaha.
Beddelka dabiiciga ah ee loo isticmaalo dharka, saliidda qumbaha waxay muujin lahayd tallaabo xooggan oo ku saabsan bakteeriyada mas'uulka ka ah huurada. Sida laga soo xigtay hal waxbarasho waxaa daabacay Joornaalka Habdhaqanka Ilkaha ee Casriga ahtijaabo lagu sameeyay laba kooxood oo carruur ah si loo isbarbardhigo saameynta labadan waxyaalood ayaa soo gabagabeyn lahaa in ficilka dilaaga ah ee saliidda qumbaha ay si isku mid ah waxtar u tahay, taas oo soo bandhigeysa caafimaad iyo badbaado badal ah kiimikooyinka.
Codsiga maxaliga ah ama sida dharka, tufaax cider suuf wuxuu noqon lahaa mid wax ku ool ah in laga saaro maqaayada ilkaha iyo dib u soo celinta cadaanka cadaankaaga. Dhanka kale, badeecadani waa mid xad dhaaf ah, sida, liin, waa in loo isticmaalo oo keliya tiro yar oo lagu qasiqiyo biyo. a waxbarasho wuxuu caddeeyaa, waxa uu leeyahay ficilo cadeynaya haddii loo isticmaalo dhexdhexaad.
Ujeedada yaabka leh ayaa muujisay Huda Beauty, blogger iyo hoggaamiyaha ganacsiga ee muusikada, dhirta cagaarshowgu waa midho badan oo leh erayo badan marka ay timaado bandhigida Hollywood-ga. Si aad uga faa'iideysato, ku burburin baradho la shiiday oo ku dar qanjaruuji soodhaha. Markaad ka saarto burburka dusha sare ee dhalada, khiyaamadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad muujiso dhoola cadad. Si kastaba ha ahaatee, ogow in saameyntani ay tahay mid ku-meel-gaadhsiisan, sababtoo ah maaha mid qoto-dheer.
Spice oo si weyn loo wada baabiiyay Aasiyaanka, qurubku wuxuu noqon karaa hab wanaagsan oo lagu ilaaliyo nadaafadda ilkaha markaad ka fogaato saameynta daawooyinka kiimikada. Ka dib a waxbarasho Iyadoo lagu salaynayo waxtarnimada daaweyntan, saynisyahannadu waxay arkeen saameyn liddi ku ah anti-bararka, lidka bakteeriga iyo anti-plaque oo la mid ah kuwa afka laga iibsado farmashiyada. Sidaa darteed, waxay ka hortagtaa muuqaalka tartar si loo ilaaliyo dhoola cad.
Digniinta: Feejignaan, sida daaweynta dabiiciga ah, waa lagama maarmaan inaad la tashato takhtar haddii aad qabtid xaalad gaar ah si aad u hubiso isdhexgalka maaddooyinkaas ku jira caafimaadkaaga. Isla sidaas oo kale haweenka uurka leh ama naaska nuujinaya.
Talooyin: Tus sida aad ujecel tahay: 5 xeerarka habdhaqanka wanaagsan ee qof dumar ah oo nafteeda ixtiraameysa